Xubno ka kooban siyaasiyiin, maalqabeeno, fanaaniin iyo shirkado ayaa loo dhacay barahooda Twitter-ka… – Hagaag.com
Posted on 16 Luulyo 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Xubno caan ah oo isugu jira siyaasiyiin, maalqabeeno, fanaaniin iyo dad awood leh ayaa waxaa loo dhacay oo farriin “dhac” ah lagu qoray baraha ay ku leeyihiin Twitter-ka, waxaana farrintaasi lagu wargelinayaa akhristayaasha in ay soo shubaan lacag u laba jibaarmeysa.
Lacagtan ayay dadka ku shubayaan akoon bitcoin oo internetka ah, waxaana loo ballan-qaadayaa in ay helayaan laba-jibaar waxa ay soo diraan.
Dadka loo dhacay barahooda twitter-ka ayaa waxaa ka mid ah Musharrax madaxweyne Joe Biden, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, Maamulaha shirkadda baabuurta Tesla ee Elon Musk, Aas-aasaha Microsoft Bill Gates, Aasaasaha Amazon Jeff Bezos iyo fannaan Kanye West iyo xaaskiisa Kim Kardashian West.
Sidoo kale waxaa loo dhacay baraha shirkadaha kala ah Apple iyo Uber.
Farrintan ayaa dhigeysa in ruuxii lacag soo dira 30 mirir gudeheed loo laba-jibaari doono lacagtiisa. Waxaad direysaa 1000 dollar oo waxaad heleysaa 2000 dollar.
Shirkadda Twitter ayaa weerarkan oo ay baaris ku wado ku tilmaantay mid qorsheysan, waxaana ay ku wargelisay macaamiisheeda in aysan ku kadsoomin farriimahaasi islamarkaana eysan iska dirin wax lacag ah.
Ma ahan markii ugu horreysay oo kooxaha burcadda internet-ka u dhacaan akoonada baraha bulshada.